10 Nzvimbo Dzakanakisa Zororo Nenzvimbo Dzakakura dzeBhasiketi | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Nzvimbo Dzakanakisa Zororo Nenzvimbo Dzakakura dzeBhasiketi
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba Britain, Chitima Kufamba China, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Chitima Kufamba UK, Travel Europe
Maonero anoshamisa, ane mavara uye anonakidza, kune anoshamisa matare ebasketball mumaguta ese aunorota kushanyira. Kana iwe uri anofarira basketball mutambi, aifarira, kana kungoda kupfura dzimwe hoops, izvi ndizvo 10 nzvimbo dzakanakisisa dzezororo dzine matare makuru ebasketball.
1. Munich Germany 3D Basketball Dare
Kumba kune imwe ye nhandare dzinoshamisa kwazvo dzenhabvu muEurope, Munich inonakidza uye inoshingairira nzvimbo yezororo. Kana iwe uchida kudzidzira dzimwe hoops munhandare inotyisa yebhasikiti, then Munich’s 3D basketball court is where you should practice. This German basketball court inotora mutambo wako kune imwe nhanho yemapundu, uye kana iwe uchikwanisa kurova pano, uchabudirira chero kupi.
Nemamwe mashoko, iyo 3D basketball dare rinokukurudzira iwe kukwidza mutambo wako. Iwe unozofanirwa kuramba wakadzikama pamusoro pemabundu akatenderedza dare iri rinopenga. Zvimwe kunze kwekuti basketball iri muchimiro chakanakira chero mutambo, kana uchida kuramba uchishanda pazororo rako, uye zvechokwadi uunze timu yako pamwe chete.
2. Pigalle Basketball Dare Paris
Vazhinji vashanyi vanoenda kuParis kunotenga uye kurarama hupenyu hwakanaka, yezororo rekuzorora kana rerudo. Ipo Paris inzvimbo inozivikanwa kune vanorota uye vanozorodza zororo, ino zvakare inzvimbo huru yezviitiko zvekunze. Paris ine mapaki mazhinji uye Rwizi Seine rwekufamba, kana kuchovha bhasikoro, kuwedzera kune yakanakisa karavara bhasiketi.
Pigalle basketball court chisikwa cheNike, zvisina-Studio, uye fashoni fashoni brand Pigalle. Kubatana kwavo kwakagadzira kupenga uku, tucked-kure pakati 2 furati zvivakwa basketball court. Pigalle's gradient colours anonakidza kwazvo, iri pakati penharaunda yeParis. Iyi basketball inoshanda zvakakwana uye yakanaka kupfura dzimwe hoops pa 17 Rue Duperre.
3. Rooftop Guta Horo Dare Dubrovnik Croatia
Dubrovnik inzvimbo yakanaka yezororo, yakakomberedzwa nemaonero eGungwa reAdriatic. Terra-cotta padenga dzimba kwese kwese, machena machena anotarisana negungwa turquoise, kukwezva mazana evashanyi gore rega rega. Dubrovnik yakavharirwa nematombo eguta masvingo, yakachengetedzwa-pamusoro pemazana emakore, uye saka imwe yematare edzimhosva akagadzirwa zvakanyanya pasi rese.
Iyi basketball basketball iri padenga reGuta Horo, nemaonero anoshamisa eGungwa reAdriatic. Chimbofungidzira kupfura hoops nekutarisa kwekare kweKutaundi uye bhuruu risingaperi. Denga repamusoro peGuta Horo bhasiketi dare pasina mubvunzo iri rimwe remabhasiketi akakurisa pasirese.
4. Imba yeMamba Basketball Court Shanghai China
Shanghai nderimwe remaguta emazuva ano uye anonakidza munyika. Pfungwa-ichivhuvhuta skyscrapers, uye akakurisa-kupfuura-hupenyu mamaki, uye pamusoro pazvo zvese Imba yeMamba basketball court, naNike. Iyi epic basketball court inonakidza uye inovandudza, yakagadzirirwa zvakakwana imwe yenzvimbo dzakanakisisa dzezororo munyika.
Imba yeShanghai House yeMamba Basketball dare izere-saizi bhasiketi dare rakashongedzerwa zvakakwana kune ako akanakisa mutambo nazvino. Dare rakagadzirirwa rwendo rweNike Rise kuChina, uye iwe unozoshamiswa neyakagadziriswa LED kuona. saka, nhanho yega yega yaunogadzira hoop inoita kuti pasi ivheneke, uye mapoka evanhu anodanidzira nekushamisika.
5. Brighton Beach Dare England
Sandy yegungwa kumahombekombe, great promenade, uye mhepo yegungwa yakachena, Brighton inzvimbo huru yezororo. Ipo England ichinyanya kuzivikanwa nezve grey denga, Brighton inzvimbo yakanaka yezororo regungwa. Nzvimbo yegungwa yaBrighton inoita kuti ive yakanaka kune zviitiko zvekunze.
Kupfura hoops pasi pezuva uye kunyange kusvetuka kubva padare rakananga kugungwa chiitiko chinotyisa. Brighton yemahombekombe ebhasikiti dare rine mamiriro akanaka kune chero mhando yemutambi kana mutambo. saka, kana iwe uri kutsvaga yakakura kushingaira kwezororo, Basketball, kushambira, uye kuzorora pamahombekombe inzira huru yekuzorora uye kuwana iwo masimba esimba kumusoro zvakare.
6. Nike Basketball Dare Thames River London
Unogona kushandisa 8 mazuva muLondon, uye zvakadaro usinga zive zvese izvo zvinofadza guta iri kupa. Kubva kushopu kuenda kune hunyanzvi nemumhanzi, London inzvimbo huru yezororo ye Solo vafambi uye mhuri. saka, hazvizokushamisa iwe kuti London iguta rakanakira zviitiko zvekunze, nemapaki anotyisa uye Rwizi rweThames.
Iyo Regal & Jorodhani basketball court paRwizi Thames idare rinotyisa rekunze kunze. Vatambi vanonakirwa nemhepo yakanaka inozorodza kubva murwizi pakati pemitambo uye vanogona kunyudza rwizi rwakanaka uye nekuona kweguta. Uyezve, dhizaini yedare inopa ekumusoro conditi0ns ane anotakurika anogadziriswa hoops uye yakarongedzwa Nike pasi yemutambo wakasununguka uye usina kukuvara.
7. Belgian Basketball Dare MuAalst
Kunaka mukudonha, yakazara vanhu muna Zvita, apo mazana evashanyi anosvika kumutambo wepagore weAalst, pane chimwe chikonzero chekushanyira Aalst gore rese. Chimwe chezvinhu chinonyanya kushamisa apa ndeche Dare raAalst rakashongedzwa, basa remunyori Katrien Vanderlinden. Nemhando dzakasiyana dzemavara akasiyana, Vanderlinden akavakira hunyanzvi hwake pamutambo wevana, Zvine musoro Zvidhinha.
saka, Aalst yakagara iri nzvimbo yakanaka yezororo, uye ino nyowani yebhasikiti yedare ndiyo yakanakisa yekuenderana neyakajairika tsika pazororo. Kwete chete kuti, asi dhizaini iri inoshamisa uye inokodzera rwendo rweawa kubva kuBrussels kungoyemura rimwe rematare akasarudzika e basketball muEurope.
NdiPanoramic Pacific maonero, makomo akasvibira akasvibira, uye kunopisa, Costa Rica iparadhiso kune chero mufambi. Kungogara ndakagara ndichitarisa kumusoro, kana kufamba pamahombekombe kunozokugadzika wakananga kune yekuzorora mamiriro.
Costa Rica inzvimbo yemunhu wese yezororo yekurota, yekuzorora kana kufambisa uye nekunakidzwa kwekunze. saka, hazvishamise kuti imwe yemapazi ezororo anoshamisa anouya nedare rakakura rebhasikiti. Finca Austria Imba yedu ine inoshamisa basketball court yakatarisa Pacific nedziva rekushambira. Chii chimwe chinodiwa nemumwe pazororo repamusoro?
9. Hong Kong Basketball Dare
Vibrant, va neutsanzi, zvinonakidza, uye kunakidzwa, Dare rebasketball reHong Kong rakangoita semusha wayo. Hong Kong ndeimwe ye nzvimbo dzakanakisa dzekushanyira kuChina nekuda kwehunhu hwayo hwenyika. Kubva pamaonero akanaka kumahombekombe uye kushanya kutenderedza chitsuwa, Hong Kong inoita kuti munhu wese adzoke zvakare uye zvakare. Dare rebhasikiti reHong Kong rakakura, itsva, mavara, uye iri mu nharaunda yakakura.
Choi Hung Estates basketball ndeimwe yemabhasiketi akanakisa muHong Kong. Uyezve, iri zvakare imwe yenzvimbo dzinoyevedza, yakanaka kwazvo kumifananidzo yakanaka. Kana usati wamboshanyira Hong Kong, zvirokwazvo bhuku rwendo kune ino inoshamisa kuenda, ndeimwe yeiyo 10 nzvimbo dzakanakisisa dzezororo dzine matare makuru ebasketball.
10. Tempelhof Basketball Dare Berlin
Kunakidzwa nekunze kwekunze ndiko kukosha kweTempelhof feld park. Kubva kuchovha bhasiketi, kana kungotonhora, Tempelhof inzvimbo yakakwana muhupenyu hunomhanyisa muBerlin. Berlin ine husiku hwakakura uye ine hushamwari kune vese vashanyi vayo, saka hazvishamise kuti guta rakaronga kugara munhu wese.
Berlin's Tempelhof basketball ndeimwe yematare makuru ebasketball muEurope. Inowanikwa pamusuwo, kunzvimbo yepikiniki, uye yakakomberedzwa nemiti yakasvibira nehuswa, iyi basketball yedare ichaita kuti unzwe kushamisa nemweya wega uye hoop.
Isu tiri Save A Train uchafara kukubatsira kuronga rwendo kune idzi 10 nzvimbo dzakanakisisa dzezororo dzine matare makuru ebasketball.
Do you want to embed our blog post “10 Best Holiday Locations With Great Basketball Courts” onto your site? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Fholiday-locations-basketball-courts%2F- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)